आवाज नेपाल, June 17, 2019
तपाईंले अहिलेसम्म कतिसम्म महँगो जिन्स लगाउनु भएको छ ? के विश्वका सबैभन्दा महँगा जिन्सका बारेमा तपाईंलाई थाहा छ ? छैन भने आउनुहोस् विश्वका सबैभन्दा महँगा केही जिन्सका बारेमा जानौँ । १. सेभेन फर अल म्यानकाइन्ड : यो जिन्स प्यान्टको ब्राण्ड हो । यो जिन्स आफ्नो फिटिङ्गका लागि चर्चित छ । उक्त ब्राण्डको एउटा जिन्स पाइन्टको […]
आवाज नेपाल, June 11, 2019
बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चनको ट्वीटर अकाउन्ट सोमबार राति ह्याक भएको छ । टर्किस साइबर आर्मी ‘अयिल्दिज टिम’ ले अमिताभ बच्चनको ट्वीटर ह्याक गरेको हो । ह्याकरले उनको ट्वीटरमा टर्की र पाकिस्तानसँग सम्बन्धित सन्देश पोस्ट गरेको थियो । ह्याकरले अमिताभ बच्चनको प्रोफाइल तस्वीर हटाएर पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको तस्वीर राखेको थियो । ‘यो पुरै विश्वका लागि […]
भारतको एउटा गाउँ ‘टिल्टेपक’ का सबै मानिसहरु अन्धो छन् । उक्त गाउँमा बस्दै आएका जोपोटेक जनजातीका मानिसहरु वास्तबमा जन्मदेखि नै अन्धो भने हुँदैनन् । तर, उमेर बढेसँगै विस्तारै उनीहरुले आखाँको ज्योती गुमेको थाहा पाउँछन् । यो के कारणले भएको छ कसैलाई पनि थाहा छैन । यस गाउँमा अन्य थुप्रै रहस्यहरु भेटिन्छन् । एउटा रुखलाई मानिन्छ […]
आवाज नेपाल, May 21, 2019
थाइल्याण्डमा एक नवजात शिशुको ज्यान बचाउने कुकुरलाई हिरोको संज्ञा दिइएको छ । ती नवजात शिशुलाई एउटा खेतमा पुरिएको थियो । यसबारे जानकारी पाएपछि १५ वर्षकी किशोरीलाई आफ्नो जिउँदो बच्चा पुरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ । डेली मेलका अनुसार गत बुधबार बिहान उत्तर–पूर्व थाइल्याण्डको कोराटमा जब ४१ वर्षका उस्सा निसिका खेत पुगे तब उनको कुकुर पिंगपंग […]
बियर मात्र पिएर ४६ दिनसम्म उपवास !
हामीकहाँ पानी तथा फलफूल खाएर उपवास बसिन्छ । कतिपय त निराहार पनि उपवास बस्दछन् । तर अमेरिकामा चाहिँ एकजना व्यक्ति बियर पिएर उपवास बसे । त्यो पनि एक दुई दिनमात्र कहाँ हो र ? पूरै डेढ महिना । अमेरिकाको ओहियो सहरमा बस्ने डेल हट नामका ती युवकले ४६ दिनसम्म बियर बाहेक अरु कुनै पनि खानेकुरा […]
अमेजनले कर्मचारीलाई दियो अफर– जागिर छोडेर व्यापार सुरु गर, पैसा कम्पनीले दिनेछ
आवाज नेपाल, May 14, 2019
संसारको सबैभन्दा ठूलो इकमर्स कम्पनी अमेजन सामानको वितरण तीब्र गर्न चाहन्छन् । यसका ‘प्राइम’ सदस्यले सामान अर्डर गरेको दुई दिनभित्र सामान पाउँछन् । अब अमेजन यसलाई एक दिनमा झार्न चाहन्छ । यसका लागि उसले आफ्ना कर्मचारीलाई एउटा अफर दिएको छ – जागिर छोड्नुहोस् र डेलिभरी बिजनेस सुरु गर्नुहोस् । कम्पनी खोल्न र व्यापार सुरु गर्नका […]
एजेन्सी – एउटा बच्चासँगै आमाको जिम्मेवारी सुरु हुन्छ । अझ भनौँ बच्चा गर्भमा आएदेखि नै एउटी आमाको बच्चाको लागि हरेक पल सर्तक हुने गर्छिन् । आफ्ना सन्तानप्रतिको आमाको जिम्मेवारी जीवनको अन्तिम समयसम्म पनि उत्तिकै रहने गर्छ । छोराछोरी जतिनै ठूला किन नहुन् उनीहरुप्रति आमाले गर्ने व्यवहार र चिन्ता सधैँ बच्चपनको जस्तै हुन्छ । यस्तै एउटा […]
काठमाडौं – अस्ट्रेलियाका एक पुरूषले १३ वर्षअघि सपनामा देखेको नम्बरको आधारमा किनेको चिठ्ठाबाट १० लाख अमेरिकी डलर जितेका छन् । परिचय नखुलाएका ती मानिसले सपनामा देखेका ती संख्याको चिठ्ठा लगातार किन्दै आएको बताएका छन् । उनले खुसी हुँदै भनेका छन् ‘मैले मेरो टिकट अनलाइनमार्फत जाँचेपछि आफूलाई िचठ्ठा परेको खबर थाहा पाएका हुँ । मैले निरन्तर […]
मोदीको मेकअपमा हरेक महिना ८० लाख खर्च हुन्छ ? यस्तो छ वास्तविकता
आवाज नेपाल, May 12, 2019
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको एउटा भिडियो सोसल मिडियामा निकै भाइरल भइरहेको छ । यसमा उनको मेकअपमा हरेक महिना ८० लाख भारु खर्च हुने दाबी गरिएको छ । करिब ४५ सेकेन्डको यो भिडियोमा केही ब्युटिसियन र स्टाइलिस मोदीको वरिपरि देखिन्छन् । फेसबुक र ट्वीटरमा यो भिडियो हज्जारौं पटक हेरिसकिएको छ भने सयौं पटक सेयर गरिएको छ […]
अमेरिकाको फ्लोरिडामा एक व्यक्तिलाई पसलेसँग गरेको ठट्टाले समस्यामा पारेको छ । ब्रायन स्लोकम गत हप्ता आफ्ना सात महिनाका छोरालाई लिएर एउटा पन शप (यस्तो पसल जहाँ सामान बेच्ने वा धितो राख्ने गरिन्छ) पुगे । त्यहाँ उनले बच्चालाई ट्रलीबाट निकालेर काउन्टरमा राख्छन् र पसलेलाई छोरा राखिदिन अफर गर्छन् । ब्रायनले यो काम ठट्यौली पारामा गरेका थिए […]